भ्रष्टाचारीको लागि गेट बन्द गर्छु | SouryaOnline
सौर्य अनलाइन २०७९ वैशाख २३ गते १२:३९ मा प्रकाशित
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तारा कुमारी काजी महतोले नेकपा एमालेको तर्फबाट माडी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेकी छन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याएर माडीको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी महतो अहिले मेयरको लागि चुनावी अभियानमा लागेकी छन् । माडीका विभिन्न वडामा १२ वर्ष वडा सचिव र पाँच वर्ष उपमेयर भएर उनले काम गरेकी छन् । माडीमा लोकप्रिय मानिने महतो, यहाँका आदिवासी, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत माडीवासीको समस्या र पीडाको बारेमा जानकारी राख्छिन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर मेयरकी उम्मेदवार तारा कुमारी काजी महतोसँग गरेको कुराकानीको अंश :
हामीले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरेर प्रतिवद्धतापत्र तयार गरी जनताको घरघरमा गएका छौँ । जनताका गुनासा र समस्या सुन्ने, आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छौँ । ठाउँठाउँमा कोणसभा गर्ने, माडीवासीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै निर्वाचनको अभियानलाई अगाडि बढाएका छौं ।माडीवासीलाई समृद्ध माडी कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ । माडीको विकासको लागि विभिन्न सुझावहरु दिनुभएको छ । हाम्रा योजना र विगतमा गरेका कामका कारण माडीवासीको भरोसा हामीप्रति नै छ । माडीवासीले अगाडि बढ्ने हौसला दिनुभएको छ ।
उपमेयर भएर एक कार्यकाल पूरा गर्नुभयो । अहिले किन मेयर बन्ने आकांक्षा राख्नुभयो ?
न्याय सम्पादन, अनुगमन, अपांगताका हक हितका विषयहरुका साथै राजस्व परामर्श समितिको संयोजकमा रहेर मैले इमान्दारीसाथ जिम्मेवारी पूरा गरेँ । माडीबाट धेरै महिलाहरु ठोरी नाका हुँदै बेचबिखनको लागि भारत लाने गरेको थाहा पाएर नियन्त्रणमा अगाडि बढ्यौँ । माडी नगरपालिकाबाट बाहिर जाने बगई नाकाबाट जाने बसहरुमा जाँच गर्न सहायता कक्ष बनाएर काम सुरु गर्‍यौं । यसरी काम गर्दा हरेक वर्ष लगभग ७ देखि १८ जनासम्म महिला, बालिका, किशोरीहरुलाई उद्धार गर्न सफल भयौँ ।
हामी निर्वाचित भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना गरेका छौँ । सामान्य उपचारमा सरसल्लाह गर्न अहेब, अनमी र एक जना सहयोगी गरी तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बगौंडा अस्पतालमा महिलाहरु गर्भवती हुँदा वा सो क्रममा गर्नुपर्ने दुई वटा भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरेका छौँ । बगौडा अस्पतालसम्म सुत्केरी हुन आउन परे घरमा सवारी साधन छैन । एम्बुलेन्स चाहिए त्यो पनि निःशुल्क गरिएको छ । कतिपय सुत्केरी र शिशुमा पोषणको कमी देखियो । त्यसका लागि पोषणको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हामीले पोषणका कार्यक्रम पनि गरेका छौँ ।
हामीले माडी नगरपालिकामा अर्गानिक कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छौं । वडा नंं. ८ मा प्रदेशकै नमुनाको रुपमा एउटा सामूहिक खेती सञ्चालन गरेका छौँ । मगर, थारु, बोटे, दुरालगायतका होमस्टेहरू सञ्चालन गरेर ति समुदायका मानिसहरुलाई आयआर्जनसँग जोडेर काम गरेका छौँ । होमस्टेहरूले जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ । माडीवासीमा शैक्षिक चेतना बढेको छ । कृषि कार्यमा परिवर्तन आएको छ । तर पनि यो पूर्ण होइन । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।
माडी भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल हो । यहाँ विकासका सम्भावनाहरू धेरै छन् । माडीका जनता र जमिनको सुरक्षा प्रमुख विषय हो । निकुञ्जसँगको द्वन्द्व हटाएर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । रिउमा तटबन्धन गरेर पर्यटकीय मार्ग बनाउनुपर्छ । भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको स्थायी बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटकको आकर्षण, विभिन्न जात जातिको संस्कृति संरक्षण, स्वरोजगारको व्यवस्था, माडीलाई शैक्षिक हव बनाउने, माडीका विभिन्न धार्मिक र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण र स्तरोन्नति गर्ने, माडीका दक्षिणतिर बग्ने खोलाहरुमा तटबन्धन, बघौडा अस्पतालको स्तरोन्नति लगायतका योजनाहरू लिएर हामी जनतामाँझ गएका छौँ । हाम्रा योजनाहरूलाई प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरी सार्वजनिक पनि गरेका छौँ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटोको सुधारका लागि हामी दुईरतीन पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेलिगेसन पनि गयौँ । कानूनी हिसाबले पनि त्यहाँ अवरोध छ भने अन्य कुराहरु पनि छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हुनाले अन्य निकायहरुले पनि अनुमति दिनुपर्ने, आफ्नै खुसीले बनाउन नपाइने जस्ता कुराहरु छन् । निकुञ्ज सम्बन्धि ऐनका कुरा छन् ।
यसमा हामीले सहजीकरण गर्न धेरै प्रयास गर्यौँ । यही कारणले यतिसम्मको बाटो निर्माण भएको हो । हामीले यसलाई धुलोरहित बाटो बनाउने भनेर पनि काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले सोचेको हो । तर, विविध कारणले त्यहाँ अहिले रोकिएको छ । यसलाई अगाडि बढाउँछौं । जंगली जनावरबाट हुने मानवीय र अन्य भौतिक क्षति कम गराउन तारवार लगाउने योजना पनि छ । निकुञ्जसँग समन्वय पनि गछौँ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई हामीले प्रतिवद्धता पत्रमा स्पष्ट पारेका छौं । हामीले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग आयोगसँग समन्वय गरेर रोजगार सहितको स्थायी बसोवासको अवधारण ल्याएका छौ । अझै पूर्णरुपमा हामीले निस्सा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । अब विजय भएर फेरि यसलाई निरन्तरता दिने हो । यस कामको लागि समय लाग्छ । हामी आत्तिनु हुँदैन । अहिले चुनावको माहोल छ । यो लगतै यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ ।
मैले भष्ट्राचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । भष्ट्राचारीहरुका लागि गेट बन्द गर्नेछु । समृद्ध माडी बनाउने विषय सबैको साझा दायित्व हो, सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछु । मेयरमा निर्वाचित भएर माडीवासीको शिर निहुरिने कुनै काम गर्ने छैन । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । समृद्ध माडी बनाउने विषयमा नै मेरो जीवन समर्पण गर्नेछु ।– प्रस्तुती न्युजकारखाना